အတတ်ပညာ China Gauze Cotton ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ခန်းပိတ်ပါးလွှာအဖြူဆေးဘက်ပိတ်ပါးလွှာလိပ်စက်ရုံနှင့်ရောင်းချသူများ |Zhongxing
ကုသိုလ်ကံ Gauze ပတ်တီး
ကုန်ပို့ရက်စွဲ 20 ရက်
လက္ခဏာများ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှု- စစ်အတွင်း အရေးပေါ် လက်သီးအကူအညီနှင့် အသင့်အနေအထား။ လေ့ကျင့်ရေး၊ ဂိမ်းများ၊ အားကစား အကာအကွယ် အမျိုးမျိုး။လယ်ကွင်းလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ်။မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် မိသားစုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု။
အားသာချက် ပတ်တီး၏ပျော့ပျောင်းမှု၊ ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အဆစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကျုံ့ခြင်းမရှိ၊ သွေးလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်အဆစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
အရွယ်အစား QTY/CTN CTN SIZE
5cm*4.5m 12rolls/dz၊ 200dz/ctn ၅၂*၂၆*၄၂
7.5cm*4.5m 12rolls/dz၊ 100dz/ctn ၃၉*၂၆*၄၂
10cm*4.5m 12rolls/dz၊ 100dz/ctn ၅၂*၂၆*၄၂
15cm*4.5m 12rolls/dz၊ 100dz/ctn ၆၂*၃၂*၄၂
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ကတိတစ်ခုရှိသည်။
1.ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းလူသည် Golabso၊ Skype စသည်ဖြင့် အမြဲအွန်လိုင်းပေါ်နေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ဖောက်သည်များ၏ပြဿနာများကိုအချိန်မီဖြေရှင်းနိုင်စေရန်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းသမားသည် ဖောက်သည်များ၏ မေးခွန်းများနှင့် အီးမေးလ်များကို 12 နာရီအတွင်း ဖြေကြားပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ မှာယူမှုများ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို အသိပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းတွင် ဓာတ်ပုံများပေးပို့မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
4.ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်များကိုနောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဟုကတိပြုပါသည်။အရည်အသွေးပြဿနာများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအား စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသော ဖြေရှင်းချက်ကို အချိန်မီပေးရပါမည်။
5.အစုလိုက်အပြုံလိုက်မထုတ်လုပ်မီ ထုတ်လုပ်မှုအကြိုနမူနာကို အမြဲထားပါ။
မေး- သင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနဲ့ ထုတ်လုပ်သူလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်!ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Q: ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ကို သေတ္တာ/အိတ်တွင် ရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ သင်လုပ်နိုင်သည်၊ oem ဝန်ဆောင်မှုကိုရနိုင်သည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်5pcs ထက်ပိုမိုသော qty နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမြန်အခကြေးငွေရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့နမူနာဝန်ဆောင်မှု (သမားရိုးကျထုတ်ကုန်များ) ကိုပေးဆောင်နိုင်သည်။
Q: အရည်အသွေးကရော ဘယ်လိုလဲ။
A: ISO, CE လက်မှတ်ကို ရယူပါ။
မေး- ဘယ်လိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို လက်ခံပါသလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် client လိုအပ်ချက်အရ T/T၊ L/C၊ Paypal၊ ဝါယာကြိုးနှင့် အခြားအခြားအရာများကို လက်ခံပါသည်။
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံး Medical Sterile3လွှာ မျက်နှာဖုံးများ
ရှေးဦးသူနာပြု Gauze Roll
Sterile Surgical Absorbent Gauze Compress
မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Mask အလုပ်, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,